Gobolka Waqooyi Bari oo Iska hor-imaad ku dhex-maray ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab - Awdinle Online
Gobolka Waqooyi Bari oo Iska hor-imaad ku dhex-maray ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab
Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaa laga soo sheegayaa in dagaal uu halkaas ku dhexmaray ciidamada ammaanka Kenya iyo xoogagga Al-Shabaab, kadin qarax halkaas ka dhacay.
Nick Ndalana oo ah taliyaha Booliska gobolka Waqooyi Bari ayaa sheegay iney dagaal kula galeen Al-Shabaab ismaamulka Gaarisa.
Warbaahinta Kenya ayaa qirtay in qarax dhulka lagu aasay lala eegtay gaari ay wateen ciidamada amaanka dowladda Kenya, walow ay sheegeen ineysan waxba gaarin, kadibna wxaaa xigay iska horimaad dhacay.
“Ciidmada waxey heleen macluumaad ku saabsan in kooxda ay halkaas joogaan, waxey ku jireen roondo, rasaas ayey kusoo fureen ciidanka markii ay ogaadeen in gaariga ka badbaaday qaraxa,” ayuu yiri taliyaha booliska.
Taliyaha Booliska wuxuu sheegay ineysan soo gaarin khasaare nafeed, walow dadka deegaanka ay ka dhawaajiyeen iney waxyeelo ku arkeen gaariga ay wateen ciidamada oo sida la aaminsan yahay ay haleeshay rasaastii la is weydaarsaday.
Daily Nation oo warkaan daabacday waxey sheegtay in weerarkaas uu ka dhacay wadada isku xirta deegaanada Burta east iyo Garissa.
Previous articleCiidanka Jubaland oo lagu wareejiyey saldhig cusub
Next articleXasan Sheekh “Afar sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayey qadiyadda badda wali taagan tahay”